Assignment Help, Cloud Based ERP System, Microsoft NAV Certification » Tea Break » Entertainment » Poems, Songs & Stories » pursuit of happiness
1 pursuit of happiness on 6th September 2009, 4:35 pm
बिहान १० बजे म उठे । आज मलाई खाना बनाउनै मन लागेन । मैले मेरो ल्यापटप सुमन लाई फरम्याट गर्न देको थिए । सुमेश र प्रेम हाम्रो रूम मा चिया खान आयो। सन्तोष ले जागर चलाएर चिया बनायो । चिया नखाको पनि दुई महिना भै सकेको रहेछ । मैले उस्लाई धन्यवाद दिए।
केटाहरु आउने समर मा घर जाने प्लान बनाइराथे । एक घण्टा जती नेपाल को गफ गरेर बसियो । नेपाल को बारेमा गफ नगरेको पनि एक महिना भई सकेको रहेछ ।एक छिन भने पनि रमाइलो भयो। लामार मा ७० जना नेपाली हरु छन जस मध्ये मेरो साथी भनेको ५ जना मात्र हो जस मध्ये सुमेश धेरै मिल्ने साथी हो । उ ओशो को भक्त पनि हो । अस्ती नेपाल गाको बेलामा उस्को बुवाले उस्लाई मुद्रास्फितिको किताब देउ है भनेर मलाई दिनु भाको थियो । उ चुरोट र बियर खाँदैन । एक हफ्ता अगाडि मात्र उस्को जन्मदिन मा हामीहरुले खिर बनाएर खाएको थियौ । हिजो मात्र एक जना दाईको मा मम र बियर पार्टी थियो । केटाहरु जे पायो त्यही गफ गरी राथे । मलाई झ्याउ लाग्यो अनी मैले टेक्सस को बहिनी लाई फोन लगाये । मेरो बैनी लाई आफु आज्कल धेरै दुखी भको कुर सुनाइरथे । मलाई आज्कल जतिखेर पनि रुन मात्र मन लाग्छ भनेर सुनये । उस्ले मलाई हरेक कुरामा साथ दिन्छ । मैले उस्लाई फेस्बुक ले मलाई डिलिट गरेको कुरा सुनाये । कबिता खुशी भको अनुभव गरे मैले । ठीक्क पर्‍यो भन्दै थियो । तर म अहिले साथी हरु सित कन्ट्याक्ट् नहुँदा एक्लो महसुस गरेको छु । जे होस् एक बर्ष फेस्बुक चलाउदा चलाऊदै बित्यो । मैले उस्लाई मेरो दाई ले आत्महत्या गरेको कुरा सुनाये । उस्को नेपाल बाट मम ले फोन गर्नु भएछ । pursuit of happiness भन्ने मुभि को बारेमा गफ भयो राती । २ बज्न लागि सकेको थियो मैले केही पनि खाकै थिइन । भोक लागि राथ्योउ । म त्एतिकै नखाइ कन हिंडे । गाडी मा काम गर्न जने ठाउँ २० मिनट मा पुगिन्थ्यो। आज्कल गाडी चलाऊदा खुब रमाइलो लाग्छ । गाना सुन्दै काम मा गयो अनी गाना सुन्दै घर आयो। काले र काली हरु सित बोल्न रमाइलो लाग्छ । दोकान्दार भईएको छ जिन्दगीमा ।stop and drive भन्ने स्टोर मा काम गर्न थालेको पनि दुई हफ्त भएछ । म आज्कल दिन्दिनै काम गर्न थालेको छु। त्एती गर्द पनि पुग्दैन । के गर्नु गर्नै पर्‍यो । शायद सँगर्श भनेको एही होला । त्यो स्टोर मा एक बर्ष अगाडि मान्छे मारेको रहेछ शूट गरेर । आज काली हरुको बवाल झगडा परेको थियो । झगडा हेर्न क्या रमाइलो लागि राथ्योउ ।काम बाट आए । खाना बनये । मामा ले merryland बाट फोन गर्नु भयो । मामाको bank मा जोब लगेछ । सुरज को के छ भनेर सोध्नु । मामाले ठिकै छ भने ।मामा ले ४ बर्ष सँगर्श गरेर बल्ल अलिकती राम्रो काम पाउनु भयो । जे भये पनि मेरो मामा कोइ सित पनि डराउनु हुँदैन । मैले वहाँलाई बधाई दिये । खाना खाएर मैले pursuit of happyness हेरे । त्यो मुभि मलाई धेरै राम्रो लाग्यो । म अन्तिम म अलिकती रोये पनि । त्एती कै त रोउ रोउ लगिरहन्थ्योउ झन त्एस्तो मुभि हेरे पछी त झन किन नरुनु । बहिरा जतिनै रोए पनि भित्र बाट म धेरै सम्एम छु ।
2 Re: pursuit of happiness on 6th September 2009, 4:35 pm
3 Re: pursuit of happiness on 7th September 2009, 6:42 am
Sigdel ji tapaiko yo story great chha tapai ko samyamta le tapai lai daro banauna maddat gareko chha. Life bhanekei sangharsa gardai , experience batuldai janeta honi ani lasta mojh garna payinchha. I m seeing that u will have most beautiful life one day...
4 Re: pursuit of happiness on 22nd December 2009, 3:23 pm
Location : New Baneshwor
malai ta yo story khoe kasto kasto lagyo; bhasa haru lathalinga chhan ...
charaitira bhatkieka ...
sudharko apeksha garchhu .
5 Re: pursuit of happiness